အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ်လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်းအား ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ‌ရေးရာ ကော်မရှင် အကြီးအကဲ H.E. Mr. Tran Van Tuy ဉီးဆောင်သည့် အဖွဲ့က လာရောက်တွေ့ဆုံ | အမျိုးသားလွှတ်တော်
အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ်လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ၊ အတွင်းရေးမှူးနှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား ဗီယက်နမ် ကွန်မြူနစ်ပါတီ၊ ဗဟိုကော်မတီ အဖွဲ့ဝင်နှင့်ဝန်ထမ်းရေးရာနှင့် အဖွဲ့အစည်းရေးရာကော်မတီ ဒုတိယအကြီးအကဲ၊ အမျိုးသားလွှတ်တော် အမြဲတမ်းကော်မတီ၊ အဖွဲ့ဝင်နှင့် ကိုယ်စားလှယ်များ‌ရေးရာ ကော်မရှင် အကြီးအကဲ H.E. Mr. Tran Van Tuy ဉီးဆောင်သည့် အဖွဲ့သည်(၂၈-၆-၂၀၁၉)ရက် (သောကြာနေ့) မွန်းလွဲ(၁၃၀၀)နာရီတွင် နေပြည်တော်ရှိ အမျိုးသားလွှတ်တော်၊ ရေးရာဆောင်အမှတ်(I-20) ဧည့်ခန်းမ၌ လာရောက် တွေ့ဆုံသည်။
ယင်းသို့တွေ့ဆုံရာတွင် H.E. Mr. Tran Van Tuy က ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၏ ရွေးကောက်ပွဲများ၊ လွှတ်တော်၏ လုပ်ငန်းစဉ်များ အကြောင်းဆွေးနွေးခဲ့ပြီး၊ မြန်မာ-ဗီယက်နမ်လွှတ်တော်ချင်းချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ ဉီးဇော်မင်းက သိလိုသည်များ ပြန်လည်မေးခဲ့ပါသည်။ ထိုနောက် အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုးက မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုရေး၊ အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအား ပြန်လည်ဆွေးနွေးခဲ့ပါ သည်။
အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ မြန်မာ-ဗီယက်နမ်လွှတ်တော်ချင်း ချစ်ကြည်ရင်းနှီးရေးအသင်း ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဉီးဇော်မင်း၊ အတွင်းရေးမှူး ဒေါက်တာမြတ်ဉာဏစိုး၊ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အမျိုးသား လွှတ်တော်ရုံးမှ တာဝန်ရှိသူများတက်ရောက်ကြပါသည်။